Cajón de Sastre, zvakawanda, zvakawanda zvinonakidza kuziva - Ikkaro
kudzidziswa >> Mimwe misoro
Zvimwe zvinoda kuziva uye zvekushandisa zvandisina chokwadi chekuisa mumapoka, kungave nekuti vanobuda mumusoro wenyaya kana nekuti hapana zvirimo zvakakwana kuti vagadzire chikamu changu.
Bhegi rakasanganiswa risiri Dambudziko reblog. Mazhinji misoro-yemisoro misoro inowira kunze kwemahombe eblog mabato. Pano isu tichawana yakawanda yezvose zvine chekuita ne DIY, uye zvigadzirwa.
Sayenzi, nhau, kuda kuziva, nhau dzezvinhu zvisingaite. Tichiri kutaura nezvemabhasikoro, mavhiri uye Goldberg Machines, zvinyorwa, zvikabudura, zvirongwa zveNASA zvauchanyatsoda.
Pfungwa iri pamusoro penguva yekuronga iri dhirowa uye kurimisikidza mumusoro. Asi iwe unoziva ...
Musi waNyamavhuvhu 3 takashanyira Museo del Carmen de Onda. A Natural science museum ine chokwadi chekumutsa kufarira kwevadiki vemhuri. Zvakanakira kushanya kunozotora maawa maviri uye zvinodhura € 2 pamunhu kana kuronga nzendo dzechikoro.
Kana iwe uri munharaunda unogona kushanyira museum uye iyo Mapako eSan José yeVall d'Uixó.
Musi waAugust 14 takaita kushanya uku nevasikana. Kunyangwe nzvimbo inonyanya kuzivikanwa iri lSaCuevas de San José nerwizi rwayo rwepasi pevhu, 200m kukwira gomo iwe une saiti yeguta reIberian-Roma., iri Asset yeCultural kufarira. Saka zvakakosha kuita kubatana kushanya. Ehezve, kudhorobha ini ndinokurudzira kuenda negwara kana iwe uchida kutsvaga chimwe chinhu.
Izvo zvinoshamisira kuenda kana pasina kana vana uye yakanakira kuenda navo, vanosara vakashama miromo mukati merwendo rwemaminitsi makumi mana uyezve zvinotibvumidza kutsanangura zvinhu zvakawanda kwavari.
Mumapako havatenderi kutora mapikicha, kunze kweimwe nguva uye tinozviita pasina kupenya. Saka ini ndinongosiya 2 mapikicha angu uye mamwe ese andakatora kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Kumba kupisa, mamiriro ekunze uye mhepo kutonhodza
Iyi posvo yakaberekwa semhedzisiro yechinyorwa Kupisa zvakanyanya kurarama rakaburitswa muNational Geographic muna Chikunguru 2021 uye rakanyorwa naElizabeth Royte, kwaunogona kuona matambudziko anokonzerwa nekupisa kwakanyanya muvanhu nemitumbi yavo, dambudziko rekukwira kwetembiricha paPasi uye netekinoroji yemhepo uye maitiro ekugadzirisa.
Pane dambudziko rakakomba. Kuti tikunde tembiricha yakakwira nemhedzisiro yadzo tinoda firiji. Asi inoshandisa huwandu hwakawanda hwemagetsi uye vanhu vazhinji uye vazhinji, kunyanya munzvimbo dzine hurombo, vanozoida.
Sezvauri kuona muchikamu chedambudziko, iyo data inotyisa. Kune atove matanho ekutsvaga nzira nyowani dzekunonoka uye kugadzirisa kugona kwemidziyo iriko. Kana iwe uchitsvaga chirongwa chitsva chekuzvipira iwe, ichi chinogona kubatsira vanhu vazhinji.
Chinyorwa chakafanana chakataurwa paIkaro chaive chekuvakwa kwe firiji inoshanda isina magetsi.
Makungwa makuru eNorth America
Ichi chinyorwa manotsi akatorwa maGungwa makuru eNorth America, rakakura landform rakandifadza. Iwo manotsi anotorwa kubva kuchinyorwa uye uye kubva kuNational Geographic zvinyorwa, ini ndinosiya iro rebhaibheri kumagumo.
Ndinovimba unonakidzwa uye unowana zvinobatsira misi yese yandinosiya. Zvino pandinoverenga nezve maIndia ekuzvarwa aigara munzvimbo ino ini ndinokwanisa kunzwisisa kukura kwayo.
Novels uye zvinyorwa zvataitaura nezvazvo pablog uye zvakaiswa muNative North American Comanche uye Bhiza Rinopenga uye Custer
Ini ndinodzokera kuYouTube chiteshi kuti ndiwedzere ruzivo
Ini ndatanga kutumira "zvakare" pane iyo YouTube chiteshi. Mumakore aya ndakanga ndasiya gumi nemaviri mavhidhiyo nezvezvinhu zvakasiyana, asi ini ndatanga kuburitsa nguva dzose.
Mavhidhiyo matatu ekupedzisira andakanyora anowirirana nezvinyorwa zvandakaburitsawo pane blog, asi hazvizogara zvakadaro. Pfungwa yeYouTube chiteshi ndeyekusimbisa iyo ruzivo pane iyo blog uye kana ndikaiwana, inogona kuve nehupenyu hwayo yega. Ndiri kuda kutsikisa zvimwe zvinhu zvinonakidza asi zviri nyore kuti ndive neposvo yangu kana iyo fomati yevhidhiyo iri yakakodzera kupfuura yakanyorwa.
Kana iwe uchida kunyorera unogona tinya pano isu tave kuda mazana matatu :)
Mavhidhiyo azvino uno ekuti uone kana uchifarira kunyorera anga ari:
Misoro mitsva uye nhungamiro nyowani yewebhu
Zvino hongu. Ndiyo shanduko huru muIkaro mumakore gumi nemaviri. Uye tarisa, ndakaita zvinhu pawebhu uye pawebhu. Mushure mekufunga kwakawanda, ndafunga kushandura Ikkaro kuti ive yewebhu webhusaiti Kusvika parizvino zvese zvandaburitsa zvakapfuura firita. Zvese zvaive zvakabatana. Zvino zvimwe zvinhu zviri kuzoonekwa izvo zvinogona kutsauka pane yakajairwa kosi. Asi ini ndinoziva kuti zvakakosha semusoro wenyaya wakasarudzwa kuita, nzira yekuzviratidza uye kuenderana pamwe neese webhu.
Ini ndoda kuti webhu irege kuzova mugumo asi kuti ishandise senzira, sechishandiso. Ini ndoda kumira kutumira zvangopedza zvinhu kuti nditange kuishandisa kuunganidza ruzivo rwezvinhu zvekuita. Zvepfungwa dzinomuka, dzemiyedzo dzinokundikana.
Sei ndisiri kuzotaurira chiitiko kana hurukuro yandakamboita nemumwe munhu kana ndakaburitsa zvinhu zvinonakidza? Kubva panguva yandinoita Ikkaro yangu chete webhusaiti webhusaiti, mamiriro ese anochinja. Ndichakunda mukunakidzwa.
Mukupedzisira isu tiri zvese zvatinoita, zvese zvinoitika kwatiri uye zvinotifadza uye zvakanaka kuzviratidza zvakatenderedza pano. Ini ndanga ndatobatanidza mamwe mawebhusaiti uye madingindira andaive ndakaparadzira uye ayo akatobatanidzwa muIkaro.
Zvipo zvakakosha kubva kumadzimambo
Ini ndinowanzo govana zvipo zvemadzimambo pa blog, inenge iri tsika. Neraki ivo vanondisiira zvinhu zvandinoda, ndisina kuvakumbira uye izvo zvinomutsa kutaura pa blog. Iye zvino nevasikana vaviri vane makore matatu ne mashanu ekukura pamusoro pezvipo zvangu, rake riri kutanga kunakidza.
Gore rino ndakafunga kusaburitsa iyo yekupinda, uyezve zvakandishamisa nekuti ndaifunga kuti zvaisanakidza, vanhu vanoverengeka vakandibvunza nezvazvo. Uye chinyorwa ichi chiri pamusoro pavo, nezve vanhu ava vakandikurudzira nemitauro yavo uye maemail. Ndine urombo nekunonoka kuburitswa, asi nekuda kwenyaya dzakasiyana dzemunhu zvaisave zvakamboitika.
Ngatiendei nekutenderera kweakanyanya kufadza.
Dodecahedron makarenda e2018
Kana iwe uri kutsvaga a karenda yedhesiki rako ra2018, yakanaka uye yakachipa uye zviri nyore kuvaka hapana chakaita seaya anodhindwa matemplate ekugadzira dodecahedrons. Sezvo iwe ungangove watofunga, pane gumi nembiri zviso zveyakajairwa polygon, imwe yemwedzi wega wega .. Muzuva rake isu takataura nezvazvo kalendari inogara narini, inova imwe sarudzo yakanaka yekugadzira zvakanaka muhuni, bepa kana kadhibhodhi.
Iwo matemplate emakereke ari muchinyorwa akagadzirwa neanotevera online chishandiso, intuitive uye nyore kushandisa. Zviri nezve dodecahedron khalendara jenareta.
Zviri nyore kwazvo. Unosarudza pakati pemhando mbiri dzedodecahedra iyo yainopa, gore rekarenda, mutauro, kana iwe uchida kuti iyo svondo nhamba iwoneke kana kwete uye fomati yainogadzira, inogona kuve PDF kana chinyorwa uye kurodha pasi.
Yangu 85 ″ LCD Kunyorera Hwendefa LZS8,5 (Boggie Board)
Iyi ndiyo nyaya yekuti sei ndisingazive ndakazopedzisira ndave neLCD yekunyora Hwendefa. Ini ndanga ndichivhura, senge mazuva ese uye ini ndaona kupihwa paGearbest yezvakaratidzika kwandiri sedhijitari yemagetsi, isu takafanana neWacom asi pa € ​​8. Masere euros !!! Sezvo zvakashata sezvazvaive, zvaive zvakakodzera kuita zvinhu zvina zvandinombofunga mupfungwa. Saka ndakaitenga.
Kushamisika kunouya pandinoigamuchira uye ini ndoona kuti izvi zvakanaka kwazvo uye kuti haina kana chekubatanidza nayo chero kupi, kana kurongedza kana chero chinhu. Saka ndakadzokera kune iyo faira uye hongu ... ini ndine yangu LCD Rokunyorera Hwendefa, iyo mukumhanyisa ndinofunga kuti zita rakanditsausa. Vamwe vanoidaidza kuti Boggie Board, kunyangwe ichi chiri chiratidzo chinomiririra chigadzirwa.
Kutsvaga kwangu kweK Knolling kunotanga ndisingazvizive kubva kumifananidzo yaTodd MacLellan uye bhuku rake Zvinhu Zvinouya Zvakaparadzaniswa: Bhuku reTeardown reMazuva Ano Rarama Mifananidzo iya yakaputika yakaita kuti ndive nerudo, uye kutsvaga rumwe ruzivo nezve munyori ini ndasvika pakuziva Kugogodza senzira yekuronga, asiwo sechimiro cheunyanzvi, kugadzira runako kubva kuzvinhu zvezuva nezuva.
Mushure memakore ekubvarura zvinhu uye nekusiya zvidimbu zvezvinhu zvese kuzvisarudzira, inogona kuve inonakidza uye yakanaka nzira yekuenderera mberi nekukatanura. Zvakandigutsa.